chipo seti Vagadziri | China chipo chakatemerwa Vatengesi & Fekitori
Iyi yekuunganidza ndiyo yedu dhizaini nyowani, iro girini girini ndicho chinhu chinozivikanwa kwazvo gore rino. Isu tinoishandisa pane yekudyira seti iyo kwete chete kune chikafu zvakare inogona kushongedza imba yako. Iko kusanganiswa kunozivikanwawo kwazvo pasi.
Iyo itis inotyisa kuwedzera kune yako dinnerware muunganidzwa. Kunyangwe yekuvaraidza kana yekushandisa kwemazuva ese zvinokupa iwe kudya kunakirwa.
Iyi yemhando yepamusoro yezvipfeko yakaiswa negirini mashizha akateedzana anogona kuita ndiro, kofi seti, makapu, teapot, mukombe uye saucer, saradhi mbiya, sangweji tireyi uye keke mira zvichingodaro, kana iwe uchida ichi chimiro asi chakasiyana chigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka taura nesu kuti tiwane.
Iyo yekudyira seti inogona kushandira yeane kana matanhatu kana gumi nemaviri mashandisiro emunhu. Inouya mune kurongedza kwechipo uye inogadzira inoyevedza chipo chinozorangarirwa. Nakidzwa!
Chitubu uye Zhizha Muenzaniso, Chipo chinhu, Zuva Nezuva Shandisa dhizaini seti
Iyi yekuunganidza ndiyo yedu dhizaini nyowani, iyo sachi ndicho chinhu chinozivikanwa kwazvo gore rino. Isu tinoishandisa pane yekudyira seti iyo kwete chete kune chikafu zvakare inogona kushongedza imba yako. Iko kusanganiswa kunozivikanwawo kwazvo pasi.
Iyi yemhando yepamusoro yezvipfeko yakaiswa neswan akateedzana anogona kuita ndiro, kofi seti, makapu, teapot, mukombe uye saucer, saradhi mbiya, sangweji tireyi uye keke mira zvichingodaro, kana iwe uchida ichi chimiro asi chakasiyana chigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kubata isu kuti tiwane.
Yakakurumbira Yemazuva Ekupedzisira Ruva dhizaini tafura yekudyira seti uye zvipo zvinhu
Iyi yekuunganidza ndiyo yedu dhizaini nyowani, iyo Chitubu Ruva ndicho chinhu chinozivikanwa kwazvo gore rino. Isu tinoishandisa pane yekudyira seti iyo kwete chete kune chikafu zvakare inogona kushongedza imba yako. Iko kusanganiswa kunozivikanwawo kwazvo pasi.
Iyi yepamusoro yemhando yezvipo yakaiswa ne Chitubu Ruva dzakateedzana dzinogona kuita ndiro, kofi seti, makapu, teapot, mukombe uye saucer, saladhi mbiya, sangweji tireyi uye keke mira zvichingodaro, kana iwe uchida iyi dhizaini asi chakasiyana chigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu kuti tiwane.
Best Akakurumbira Dhizaini Cactus Kudya kwemanheru seti uye Chipo zvinhu
Iyi yekuunganidza ndiyo yedu dhizaini nyowani, iyo cactus ndiyo inonyanya kufarirwa chinhu gore rino. Isu tinoishandisa pane yekudyira seti iyo kwete chete kune chikafu zvakare inogona kushongedza imba yako. Iko kusanganiswa kunozivikanwawo kwazvo pasi.
Iyi yepamusoro yezvipenga yakaiswa necactus dzakateedzana dzinogona kuita ndiro, kofi seti, makapu, teapot, mukombe uye saucer, saradhi mbiya, sangweji tireyi uye keke mira zvichingodaro, kana iwe uchida ichi chimiro asi chakasiyana chigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kubata isu kuti tiwane.
Iyi yekuunganidza idhizaina yedu nyowani, izvo zvekuda zvinhu ndicho chinhu chinozivikanwa kwazvo gore rino. Isu tinoishandisa pane yekudyira seti iyo kwete chete kune chikafu zvakare inogona kushongedza imba yako. Iko kusanganiswa kunozivikanwawo kwazvo pasi.
Zvinyorwa: nyowani pfupa china & yakanaka pfupa china